စူပါ Scanner, လက်ကျင်းပလက်တရုတ် မှစ. သတ္တု Detector စူပါ Scanner, လုံခြုံရေးစူပါ Scanner လက်ကားကျင်းပ
ဖေါ်ပြချက်:စူပါ Scanner ကျင်းပလက်,လက်-ကျင်းပစူပါ Scanner,လက်သတ္တု Detector စူပါ Scanner ကျင်းပ,လုံခြုံရေးစူပါ Scanner,,
Home > ထုတ်ကုန်များ > လက်ကိုင်သတ္တု Detector > စူပါ Scanner ကျင်းပလက်
စူပါ Scanner ကျင်းပလက် ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, စူပါ Scanner ကျင်းပလက်, လက်-ကျင်းပစူပါ Scanner ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, လက်သတ္တု Detector စူပါ Scanner ကျင်းပ R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
စျေးပေါပရော်ဖက်ရှင်နယ်သတ္တု detector  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
လုံခြုံရေး heavy metal detector  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
လုံခြုံရေးသတ္တုစကင်နာစျေးနှုန်း  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
လုံခြုံရေးပေါ်ကိုသတ္တု detector  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
သတ္တု detectors အအမျိုးအစားများ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
လုံခြုံရေးခွဲခြားဆက်ဆံမှုသတ္တု detector  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
လုံခြုံရေး metal detector လက်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
လုံခြုံရေးအဘို့ကိုအတိအကျရှာရန်သတ္တု detector  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ထိပ်တန်း rated သတ္တု detectors အ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Mini ကိုလက်သတ္တု Detector  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
charger နဲ့လက်ကိုင်သတ္တု detector  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
တန်းမြင့်ခရီးဆောင်လက်ကိုင်သတ္တု detectors အ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အဆင့်မြင့်ခရီးဆောင်လက်ကိုင်သတ္တု detectors အ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ယုံကြည်စိတ်ချရသောဒေတာဘေ့စလက်ကိုင်သတ္တု detector  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
လက်-ကျင်းပသတ္တု detectors အ (လူပျို switch သည်)  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အိတ်ဆောင်လက်-ကျင်းပသတ္တု detectors အ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
စူပါ standby GC-3003 သတ္တု detector (ကို standby လက်ရှိ2MA) အမည်: GC-3003 တစ်အလတ်စားနှင့်မြင့်မားသော sensitivity ကိုလက်-ကျင်းပသတ္တု detector ဖြစ်ပါသည်, ၎င်း၏အကြီးမားဆုံးအင်္ဂါရပ်သာ 2MA လက်ရှိပေမယ့်တာရှည် standby အချိန်သည်ဖြစ်ပါတယ်။...
လုံခြုံရေး heavy metal detector
သတ္တု detectors အအမျိုးအစားများ
စူပါ standby GC-3003 သတ္တု detector (ကို standby လက်ရှိ2MA) အမည်: GC-3003 ကိုလည်းလက်လို့ခေါ်တဲ့အလယ်အလတ်နှင့်မြင့်မားသော sensitivity ကိုလက်ကိုင်သတ္တု detector ၎င်း၏အကြီးမားဆုံးအင်္ဂါရပ်သာ 2MA လက်ရှိပေမယ့်တာရှည် standby အချိန်သည်ဖြစ်ပါသည်, သတ္တု...
လုံခြုံရေး metal detector လက်
ထိပ်တန်း rated သတ္တု detectors အ
Mini ကိုလက်သတ္တု Detector
တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း: USD 12.5 / Set/Sets
(ခိုင်ခံ့ခြင်းနှင့်အားနည်းညွှန်ပြချက်အလင်းနှင့်အတူ) စူပါမြင့်မားသော sensitivity ကို GC-1002metal detector ဖော်ထုတ်မယ်အကွာအဝေး: 1. Pin 30 - 50mm 2. 64 အမျိုးအစားပစ္စတို 200mm 3. ခြောက်လက်မဓားမြှောင် 250mm 4. အချင်း 20mm သံမဏိဘောလုံးကို 120mm...
Supply နိုင်ခြင်း: 150000pcs/Month,5days
MD-3003B1 လက်-ကျင်းပသတ္တု detectors အ နယူးမော်ဒယ် \_ လူပျို switch ကို: (အဘယ်သူမျှမလက်ကိုင်စွပ်အိတ်, မှိုကနေတိုက်ရိုက်ပုံနှိပ်လိုင်းများ) နိဒါန်း: အကြမ်းခံအကြီးစားစကင်ဧရိယာ, တည်ငြိမ်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်, မြင့်သော sensitivity...
တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း: USD6/ Set/Sets
Supply နိုင်ခြင်း: 200000pcs/Month,2days
လက်-ကျင်းပသတ္တု detectors အ (လူပျို switch သည်)
တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း: USD 5.5 / Set/Sets
MD-3003B1 လက်-ကျင်းပသတ္တု detectors အ နယူးမော်ဒယ် \_ လူပျို switch ကို: (အဘယ်သူမျှမလက်ကိုင်စွပ်အိတ်, မှိုကနေတိုက်ရိုက်ပုံနှိပ်လိုင်းများ) နိဒါန်း: နေရာလေးကိုဖွဲ့စည်းပုံ, လှပသောရုပ်ဆင်းသဏ္ဌာန်။ နှိုးစက်အရိပ်အယောင်: အသံသတိပေးချက်နှင့် LED...
အိတ်ဆောင်လက်-ကျင်းပသတ္တု detectors အ
တရုတ်နိုင်ငံ စူပါ Scanner ကျင်းပလက် ပေးသွင်း
လက်မှုကြောင့်အချို့သောကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း R & D ကိုမှပူကိုရောင်းခြင်း, ကျယ်ပြန့်ကြိုဆိုအချို့မော်ဒယ်စူပါစကင်နာကျင်းပခဲ့တယ်။ ဒါ့အပြင်အလွန်နှစ်သက်ဖွယ်သောစျေးနှုန်း။ လက်-ကျင်းပသတ္တု detector ကိုထိခိုက်ခံရခြင်းနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုအကြမ်းဖက်ဝါဒအားဖြင့်ပျက်စီးခံရခြင်းမှလူရဲ့အသက်တာကိုကာကွယ်ပေးသည်။ တရုတ်ကျင်းပကျင်းပသတ္တု detector စျေးပေါဒါပေမယ့်လည်းအသုံးပြုမှုအတွက်ကောင်းလှ၏။ နှင့်လည်းသင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုကတန်ဖိုးရှိ 1 နှစ်အာမခံ, ပူဇော်!
စူပါ Scanner ကျင်းပလက် လက်-ကျင်းပစူပါ Scanner လက်သတ္တု Detector စူပါ Scanner ကျင်းပ လုံခြုံရေးစူပါ Scanner ရွှေ Detector ကျင်းပလက်